Istaraatiijiyada Tusiyaha ADX ugu fudud ee Xulashada Jeebka taasoo i siisay natiijooyin fiican - Pocket Option Review
Waxaan maqaaladeydii hore ku sheegay “Trend is our friend”. Si kastaba ha noqotee, haddii aad runtii rabto inaad sameyso xoogaa lacag ah oo wanaagsan oo leh ganacsi isbeddel leh. Waxaad u baahan tahay inaad aqoonsato xoogga isbeddelkaas. Sidaa darteed, maqaalkan, waxaan kaga hadli doonaa mid ka mid ah tilmaamayaasha waxtarka leh ee ADX. Tilmaamahan ayaa hubaal ah inuu kaa caawin doono inaad hesho xoogga isbeddelka.
Waa maxay ADX Tusiyaha?
ADX ama celceliska dhaqdhaqaaqa jihada ee 1978 waxaa sameeyay J. Welles Wilder. Tusiyahani waa tilmaanta isbeddelka ah ee naga caawinaysa in aan aqoonsanno xoogga isbeddelka inagoo gariiraya inta u dhaxaysa 0 -100. Tusiyahan waxaa loo isticmaali karaa labadaba suuqyada isbedbeddelaya iyo Range.
Tusiyahani wuxuu isticmaalaa saddexda xariiq ee ugu muhiimsan xariiqda ADX, + DI line, – DI line si loo xaqiijiyo isbeddelka. Isdhaafsiga + DI iyo -DI waxay abuurtaa wax iibsiga iyo iibinta fursadaha.
Sida loo habeeyo Tusiyaha ADX ee Pocket Option
Dejinta tilmaamuhu waa wax fudud. Marka hore gal akoonkaaga Guji tilmaame ku yaal xagga sare ee bogga.
Beddel midabka oo mugdi geli khadka si aad u aragto. Waxaad sidoo kale bedeli kartaa qiimaha ADX. Si kastaba ha ahaatee, Tusiyahani wuxuu si fiican ula shaqeeyaa goobaha caadiga ah.
Sidee looga ganacsan karaa Tusiyaha ADX?
Ku-ganacsiga tusaha ma aha wax adag. Waxaad si fudud uga ganacsan kartaa iyada oo la mid ah. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad diirada saarto isdhaafsiga + DI iyo khadadka -DI. iyo meelaynta khadka ADX.
Ka Samee Ganacsiga Iibka Isgoysyada Wanaagsan
Marka xariiqda + DI ay isku xirto xariiqda -DI xagga hoose Waxay muujinaysaa isbeddel xoog leh. Si loo aqoonsado xoogga isbeddelka waxaad u baahan tahay inaad hubiso xariiqda ADX khadka midabka cad. Haddii xariiqda ADX uu ka sarreeyo khadka dhexe ie 23 Waxay muujinaysaa isbeddel xoog leh oo xoog leh halkan waxaan ku samayn karnaa ganacsi iibsi.
Ka Samee Ganacsiga Iibinta at crossover taban
Si la mid ah, Marka xariiqda -DI ay isku xirto khadka +DI ee sare. Waxay tilmaan u tahay isbeddelka dhabarka. Hadda, Marlabaad ka hubi xariiqda ADX xoogga isbeddelka. Haddii xariiqda ADX uu ka sareeyo xariiqda dhexe ie 23. Waxay muujinaysaa isbeddel xoog leh oo dhabarka ah halkan waxaan ka dhigi karnaa ganacsi iib ah.
Waxaan ku daboolay wax walba oo ku saabsan tusiyaha ADX ee maqaalkan. Tani waa mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu wanaagsan ee aan arkay. Haddii sidoo kale aad rabto inaad ka hesho natiijooyin wanaagsan tan isku day tilmaan- bixiyahan koontada demo ee Xulashada Jeebka . Hoosta iigu sheeg faallooyin haddii aad u aragtay tilmaame mid waxtar leh. Ilaa hada…. Waxaan kuu rajaynayaa nasiib wacan!!
Sida loo akhriyo Tusiyaha ADX
Sida loo isticmaalo tilmaame ADX
Sida loo isticmaalo tilmaame adx ganacsiga maalinta
Xeeladda tilmaame ADX
Previous articleSida loo sameeyo ganacsiyo muhiim ah iyadoo la isticmaalayo Bollinger Bands ee Xulashada Jeebka
Next articleTilmaamaha fudud ee sida loo isticmaalo Stochastic Oscillator ee Doorashada Jeebka